Neymar Oo Halis Ugu Jira In Laga Ganaaxo Finalka Champions League & Ficil Uu Sameeyey Oo Qayb Ka Qaadan Kara Faafista KORONA FAYRASKA - Gool24.Net
Neymar Oo Halis Ugu Jira In Laga Ganaaxo Finalka Champions League & Ficil Uu Sameeyey Oo Qayb Ka Qaadan Kara Faafista KORONA FAYRASKA
Xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa halis ugu jira inuu la kulmo ganaax sabab u noqon kara inuu seego ciyaarta finalka tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan, kaddib markii uu kulankii xalay ay 3-0 ku garaaceen RB Leipzig uu jabiyey sharciga iyo nidaamka ay UEFA u dhigtay badqabka ciyaartoyda iyo xakamaynta Fayraska Korona.
Neymar ayaa ka caawiyey PSG inay iska xaadiriso finalka tartanka Champions League markii ugu horreysay taariikhda, waxaana uu qayb ka ahaa ciyaartii uu wacdaraha dhigay Angel di Maria oo uu kubadda hore caawiye uga noqday.
PSG waxay sugaysaa Bayern Munich iyo Lyon oo caawa wada ciyaaraya midkooda soo badiya, iyagoo jilbaha isku dhigan doona kulankii ugu horreeyey ee final Champions League ah ee garoon madhan lagu ciyaaro.
Neymar ayay UEFA ku samayn doontaa baadhitaan la xidhiidha gefka uu u geystay sharciga iyo ilaalinta badqabka ciyaartoyda kaddib markii uu shaadhka u beddelay mid ka mid ah ciyaartoyda BB Leipzig.
“Ciyaartoyda waxa lagula dardaarmayaa inay ka dheeraadaan inay shaadhka kala beddeshaan.” Ayaa uu leeyahay qodobka sharci ee uu Neymar jabiyey oo qaybtiisa dambe caddaynayso in UEFA ay anshax marinin doonto ciyaartoiyda ku xad-gudba.
Neymar iyo PSG ayaa rajaynaya in dardaaranka UEFA ee ka dheeraanshaha in garamada ay ciyaartoydu kala beddeshaan aanay saamayn sababi doonin ciqaab lagu rido ciyaartoygan, laakiin wararka qaarkood ayaa sheegaya in arrintu ay gaadhi karto halka ugu xun oo lagu ridi karayo ganaax uu ku fadhiyo ciyaarta finalka.
Si kastaba, Neymar oo qayb weyn ka ah PSG ayaa haddii lagu rido ganaax waxay burbur ku noqon doontaa naadigiisa oo aanay jirin cid booskiisa u buuxin karta.